३ अर्ब २० करोडमा विनोद चौ`धरीले किने साउदी राज कुमारको होटेल !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/३ अर्ब २० करोडमा विनोद चौ`धरीले किने साउदी राज कुमारको होटेल !!
काठमाडौं। नेपालका अर्ब पति व्यवसायी विनोद चौधरीलले के`न्याको नैरोबीमा साउदी अरेबियाका राज कुमारको लगानी रहेको लक्ज`री होटल किनेका छन्। नैरो`बीमा रहेको ‘फेयरमण्ट द नरफल्क’ र फेयरमण्ट द मा`रा सफारी क्लबको स्वामित्व चौधरी ग्रुपले खरिद गरेको हो।
साउदी अरेबियाका राज`कुमार अल वालिड विन तलालले उक्त होटेलको स्वामित्व चौधरी ग्रुपलाई विक्री गरेका छन्। कोरोना महामारी शुरु हुनु अगाडि नै उक्त होटेल खरिद बिक्रीको डिल सम्पन्‍न भएको साउदी अरे`बियाका मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन्।साउदी राजकुमारले २.८ अर्ब केन्‍नियन सिलिङ (करीब ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ)मा होटेलको स्वामित्व विक्री गरेका छन्।
साउदीका यी राजकु`मार अहिले आर्थिक हिसाबले निकै समस्यामा परेका छन्। केही महीनाअघि उनलाई भ्रष्‍टाचार अभियोगमा पक्राउ गरिएको थियो। साउदी राजकुमारको लगानीमा केन्यामा रहेका सबै व्यवसायबाट उनले हात झि`केका छन्। अल वालिड विन तलालले केन्यामा रहेका सबै होटेल व्यवसाय विक्री गरिसकेका छन्। अब अन्यत्रको व्यवसायमा लगानीको योजना उनले बनाइरहेको साउदी अरबका मिडि`याहरूले उल्लेख गरेका छन्।
उक्त होटेलको स्वामित्व खरिद गरेपछि चौधरी ग्रुपले होटे`ल रिनो`भेटको काम शुरू गरेको छ। एक वर्ष लगाएर होटेल रि`नोभेट गर्न लागिएको छ। एक साता अघि ‘फेयरमण्ट द नरफल्क’ र फेयरमण्ट द मारा सफारी क्लब’का सबै कर्मचा`रीहरूलाई कोभिड-१९ ले पारेको असरलाई कारण देखाएर हटाइएको छ।
फेयरमण्ट होटेलका राष्‍ट्रिय महाप्रबन्धक मेहधी मोरदले कोरोना महामारी कहिलेसम्म जाने र कति असर पर्ने भन्‍ने यकिन नभएकाले कर्मचारी कटौती गर्नुपरेको आन्तरिक मेमोमा उल्लेख गरेका छन्।चौध`रीले एसिया र मध्यपू`र्वी देशहरूमा लगानी विस्तार गरि`रहेका छन्।